The Pad, ဒီဟာဒူဘိုင်းမှာတည်ဆောက်နေတဲ့ iPod | ကိုအခြေခံထားတဲ့မျှော်စင်ဖြစ်တယ် ငါက Mac ပါ
နောက်တစ်ခုသင်ပြတော့မည့်အဆိုပါအဆောက်အ ဦး ကို The Pad ဟုခေါ်သည်။ ဒီ ၂၄ ထပ်မြင့်တဲ့အဆောက်အအုံဟာအပြီးသတ်တော့မယ်။ ဟုတ်တယ် ဒူဘိုင်းရှိအဆောက်အအုံနှင့်၎င်း၏ဒီဇိုင်းသည်ဆိပ်ခံတံတားပေါ်တွင်တင်ထားသော iPod ၏ပုံသဏ္isာန်ကိုအခြေခံသည် Apple မှ အလားတူပင် The Pad ၏ဗိသုကာသည်ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်သူများ၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နည်းပညာဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုပြောပါမည်။ ၎င်းတွင်နည်းပညာများစွာပါဝင်ပြီး၎င်းကိုလူကြိုက်များသော Marvel ဇာတ်ကောင် Iron Man နှင့်ဆင်တူသည်။
အဆိုပါ Pad သည်ဒူဘိုင်း၌ခဏတစ်ဖြုတ်ဆောက်လုပ်လျက်ရှိသောအဆောက်အ ဦး တစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးဝယ်ရန်အတွက်အဓိကခရီးသွား dest ည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည့်ဤမြို့သည်လည်းကမ္ဘာပေါ်ရှိအမြင့်ဆုံးအဆောက်အ ဦး ဖြစ်သော Burj Khalifa နှင့်အမြင့် ၈၂၃ မီတာအမြင့်ကိုနှစ်သက်သည်။ Y ဒီကနေအမြင့်ကနေမဟုတ်ဘဲအထင်ကရသင်္ကေတကနေ The Pad ဖြစ်ချင်တယ်.
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဒီဇိုင်းကိုလူကြိုက်များသောဟောင်ကောင်ဗိသုကာမှပြုလုပ်သည် ဂျိမ်းဥပဒေ. ဥပဒေသည်အများပြည်သူအားထူးခြားသောတည်ဆောက်ပုံများဖြင့်အံ့အားသင့်စေသည့်ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ။ နောက်ဥပမာတစ်ခုမှာ OPod Tube အဆောက်အအုံဖြစ်ပြီးဆလင်ဒါကွန်ကရစ်အဆောက်အအုံများကိုအိမ်တွင်းနည်းပညာများစွာဖြင့်အိမ်များအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။
သို့သော်သူသည် iP Pad ပေါ်တွင်၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုအခြေခံသောPadရာမ ၂၄ ထပ်အဆောက်အအုံဖြစ်သည့် The Pad ဟုအမည်ရသည့်စီမံကိန်းနှင့်ထပ်မံခြေလှမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူစွာနှင့်ထံမှမှတ်ချက်များအရသိရသည် business Insider: « Pad သည်နည်းပညာကိုပေါင်းစပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဆော့ဖျဝဲ ဒီနေ့လူတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအင်ဆန္ဒများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောတုန့်ပြန်မှုပေးသောအဆောက်အအုံများဖန်တီးရန်အတွက်ဗိသုကာနှင့်တည်ဆောက်ပုံ "
သို့သော်၎င်း၏အပြင်ပန်းအံ့သြဖွယ်ရာများသာမကအတွင်းပိုင်းကလည်းသင်၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ နှင့်အညီ, ကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ကတက်စေ၎င်း၏ 231 တိုက်ခန်းများအတွက်နည်းပညာအပြည့်အဝ။ သူတို့အားလုံး တံဆိပ်များရှိသည် RFID သော့အစား၊ ရေချိုးခန်းသည်အိမ်ငှားသူများ၏ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်နှင့်တပြေးညီအစီရင်ခံစာများ၊ တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်တစ်ခု virtual reality စီမံကိန်း « iReality »ကိုခေါ်ခဲ့သည်။ ပုံတွေကိုအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်ပေးပြီးသူ့ဟာသူပြောင်းလဲလိမ့်မယ် ကမ္ဘာအနှံ့ခရီးသွား tourist ည့်သည်စုစုပေါင်း ၆၂ ခုအထိစီမံရန်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » The Pad, ဒါကသူတို့ iPod ကိုအခြေခံထားတဲ့ဒူဘိုင်းမှာသူတို့တည်ဆောက်နေတဲ့မျှော်စင်ဖြစ်တယ်
0% ရန်ပုံငွေ၊ စနစ်သစ် beta အသစ်များ၊ ပြင်သစ်တွင်အက်ပဲစတိုးသို့အလည်အပတ်ခရီးကိုပိတ်ပင်ထားခြင်းနှင့်အခြားများစွာ ငါ Mac ထဲကနေတစ်ပတ်တာအကောင်းဆုံး